महाराज कि जय !!! –
महाराज कि जय !!!
राजेन्द्र बानीयाँ,वरिष्ठ सञ्चारकर्मी-
सत्ता निरंकुश हुन्छ,हुन खोज्छ।यो राजनितीक सिद्धान्तबाट निशृत भएको सत्यप्रती असहमती जनाउनु परेन । तर सत्ताको भर्र्याङ् जनता हुन् ,सत्तामा पुगेसी पहिले भर्र्याङ् फाल्नेहरुले बाउलाई डोकोमा हालेर फाल्न लैजाँदा छोरोको आग्रह किन बिर्सेकोरु कि महाराजका टारूतिरका मानुसपुत्र त्यसो भन्दैनन् होरु होला पनि किनकी हजुरका नाममा तिनिहरु लुटको खेती गर्न ब्यस्त छन् नि । जिन्दगिमा जागिर खाको छैन,गाउँबाट आउँदा किनेको स्टोभ र कुच्चेको डेक्ची फाल्न भ्याको छैन,तर अहिले चिल्लो गाडी र आलिसान महल छ । हजुरलाई तिनको सान र सौकत कसरी आयो भनेर सोध्न जरुरी या समय छैन,हुन पनि हुँदैन किनकी कोरोनाको कहरमा पनि यिनैले त हो हजुरको सपरिवारलाई मार्सी खुवाउने।
हजुरको नारा समृद्द नेपाल सुखी नेपालीूप्राप्त भयो भनेर घेरा हालेर बस्नेले भनेका होलान् । कम्जोर जगमा उभिएका,जनताबाट कहिल्यै निर्वाचित हुन नपर्ने,हिम्मत गरे वडा सदस्य बन्ने हैसियत पनि जनताले नदिनेले भन्ने नै तेहि हो-महाराजको समृद्द नेपाल सुखी नेपालीू साकार भै सक्यो । हजुरले कसरी यति छिटो त भनेर मर्जी भो भने हुतिहारा महाजनले जाहेर गर्छन् – महाराज हामी टारूको बालुवाूमा बस्ने या खुमलू भर्ने,सिन्को नभाँच्नेको त यत्रो प्रगती छ,काम गरेर फुर्सद नै नहुने नेपाली त कहाँ पुगे कहाँ र? भन्लान् । अनि हजुरले काजु खाँदै चाँदीको कचौरामा थुक्दै समृद्धि हेर्न दरबारमार्ग छिर्नु पर्ला । पहिले छाक टार्न सुटुक्क छिरेको हजुर नपुगेको पनि हुन सक्छ,तर धेरै गएका छन् नारायणहिटी पनि त्यतै छ । तर हजुर त्यता नजर नबक्सेला,त्यही एउटा बाँकी हो हजुरको पालामा आफ्नै हिमालतिरको यतिूपाल्नु पर्छ त्यहाँ ।दरबारमार्ग कालो चस्मा लगाएर इस्टकोटमा घुमेसी हजुरलाई बिस्वास हुन्छ कति समृद्द अनि शान्त छ हजुरको राज । गाउँ र त्यहाँको दुख हेर्न अहिले जानुपर्दैन। चुनाबमा जाने हो,नत्र पैसा पठाम्ला,भोट पार्सल गर्छन् नि जनताले।
अझ रमाइलो कुरा हजुरलाई प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भन्दिनु पर्यो । रैतीले प्रस्न सोध्ने होइन,हुकुम तामेल गर्ने हो । हजुरका बिस्वासपात्रले कर तिर भनेको बेला जनताले कर तिर्ने हो,तिरेकै छन् । लकडाउन गरेको छ, ढुङ्गा पकाएर आफुनी खाउ,बच्चालाई पनि खुवाउ भनेसी खुरुक्क घर भित्र बस्ने हो। बत्ती बाल्ने,१०५छुट छ । इन्ड्क्क्सनमा पकाउने, १५५ छुट छ । किरा मिसिएको सहि चामल भएनी सित्तै बाँडेको छ त,भेटे पकाएर खानु,नभेटे हेरेर अघाउनु। महाराज हजुरको राज्यमा निषेधाज्ञा गारो भो,लकडाउन बक्स होस् भन्छन् -तथास्तु भन्दिने हो । नत्र प्रस्न सोध्ने अराजकहरुलाई सामाजिक सन्जाललाई सोध भन्दे हुन्छ । त्यसले नपुगे हुक्के,बैठके अनि नन्दी भृङ्गीमार्फत टीभीमा उज्यालो काजु खाको अनुहार देख्न पाइएको छ भनेर चित्त बुझाउ भन्ने हो ।अलि अलि रोग अनि हप्ता दिनको भोक त त्यतिकै बिसेक हुन्छ जनताको।
कोरोना पनि केही होइन हामीलाई,हजुरहरु चाहिँ सुरक्षित रहुनुहोला यति भए पुग्छ। जनतालाई उनैको पैसोमा जहाज चढाइदेकै छ,चार तारे होटेलमा राख्देकै छ, मृत्यु भएसी नै सहि पोजिटिभ रिपोर्ट देकै छ । यति गर्दा नि नदेख्नेलाई पक्कै मोतिबिन्दु छ होला । बरु हजुरको परिक्षण सकिएको भए झगडा गर्न हजुरको तिर बेला बेला अगेनाूमा झगडा पकाउनेको पनि परिक्षण बक्सेला । पुग्यो भने सत्तामा सेवा गर्दागर्दा दुख पाका उहाँका आफ्नै घर र नाताका गोडा एक दर्जनको पनि गर्दिन हुकुम बक्सेला। नम्बर नि बढ्छ,सत्रु नि खुसी हुन्छन् । दाउरामा पक्कु पकाएर खान्छन् । दैनिक संक्रमितको संख्या अलि थप्दिबक्सेला,मृतकको संख्या थप्न पर्दैन,आफै जनता सोत्तर हुन्छन् ,गणक पठाए पुग्छ । बरु हजुरहरु, फ्यानहरु अनि सामाजिक सँजालमा खटाइएका टारूतिरका मट्टारेहरुको बरु दैनिक अझ दिनमा दोहोरो परिक्षण गर्नुपर्ला । यसो गर्दा ढुकुटीको अर्ब घट्छ,भान्छेहरुको करोड बढ्छ नि । अनि अरु थप केहिको समृद्धि थपिन्छ । बरु भान्छे यहि कोरोनामै परिबर्तन गर्दा बेस हुन्छ कि हजुर । यसो गर्दा थप बिचौलिया,माफिया अनि आफन्तले ठुला भिल्ला बनाउँछन् नि,पछि झगडा पर्दा या सुकला गर्न मन लाग्दा साउनाू लिने ठाउँ थपिन्छ नि । यसै नि हजुरलाई टावर मोह छ ।
हजुरलाई गाथ गादीमा कस्तो छरु कतिले यतिबेलै आबेले स्वास्थ्यकै कारण देखाएर २००६ देखिको जनताको सेवा छाडे भनेर मुसे स्वरमा भने भन्ने सुनेँ। तिनलाई जागिर सकिएका बारम्बार थपिएका र थमौती पाएका क्रान्तिकारी बिद्द्वान लगाएर ठिक लगाइदिए हुन्छ । नेपाल जापान जस्तो होरुसत्ता त्यसै र त्यत्तिकै आको हो ररु फेसबुकेले टारूमा घर बनाइदेको हो र ? जसलाई लेखेर देको उसले त जाइफल पायो भन्न लगाइदिने हो । त्यही पनि हजुरले हाई या हाच्छियुँ गरे त बुझिहाल्छन् नि हजुरका समर्थकले ।एक दिन जेल नबसेकाले राजिनामा माग्न मिल्दैन ,पेसा ब्याबसाय गरेकाले त मिल्दै मिल्दैन ,कि उत्तर कि दक्षिणतिरबाट दक्षिणा नपाएकाले त झन मिल्दै मिल्दैन । फेरि सत्ता र सरकार स्वास्थ्यले चलाउने हो ररु सके पशुपतिनाथले चलाउँछन्,नसके माडीमा जन्मेका रामूले चलाउँछन् नि भनिदिए हुन्छ।
यत्ती हो,हजुर खुसी हुनुपर्यो। अर्को नक्सा छाप्नु छ ,अर्को सेक्युरिटी प्रेस पो ल्याउने हो कि । य माफी माग्छु,कहिले कहि आफुलाई नि टारूको भान्छे जस्तो सम्झेर सुझाब पो दिन खोज्दो रहेछु । जनही बक्स होस् सपनामा नेपालमा गणतन्त्र आएको पो देखेछु ।नक्सा छाप्ने हजुरको पहिल्यैको मिसिन ठिक छ । बरु पैसा पुगेन भने अब तूरास्ट्रिय बाणिज्य बैंकूछँदैछ नत्र लगानी बोर्डूले बिदेशबाट ल्याउँछ ।हजुरको ध्यान नटुटोस्,जनता के जनतारु जाबो दूध भात पनि आफै खान नसक्नेरु९यो नितान्त एउटा निजात्मक अनुभूति र सपना भएकाले कसैको निजि जीवनमा मेल खान गएमा संयोगमात्र हुनेछ !
« बागमतीमा महिला भन्दा पुरुष बढि संक्रमित
स्याङ्जामा एम्बुलेन्स दुर्घटनाहुदा दुई जनाको मृत्यु, गर्भवतीसहित दुई घाइते »